Konke malunga nePisces Ukunyuka kwaye yintoni eyongeza kuBuntu bakho - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Konke malunga nePisces Ukunyuka kwaye yintoni eyongeza kuBuntu bakho
Iipisces ezonyukayo zisayina amaphupha okufezekisa izinto ezinesibindi. Ukuba uyiPisces enyukayo, fumana impembelelo yolu luvo lwe-astro kubuntu bakho beempawu zodiac
Iipisces ezikhulayo kukudityaniswa kweminye imiqondiso ye-zodiac eza phambi kwayo. Ukuba unalo mbandela kwitshathi yakho yokuzalwa, ikwenza ube ngumntu onobuntununtunu kunye nobuninzi. Ewe iimvakalelo zakho zinamandla endalo kunye neemvakalelo zakho kunye ne-intuition yakho ziyandiswa kunye neli phepha kwitshathi yakho yokuzalwa. Inkuthazo yakho yoyilo inomtsalane, kunye nencasa yakho yobuhle kunye nemvisiswano. Uyakuthanda ukubhadula kwaye ukhangele amava amatsha ngohambo lokomoya okanye lwengqondo. Fumanisa ukutolikwa kukaSusan Taylor ngolu hlobo lobuntu kunye nokuzisa kwakho.
Bazalwa njani abantu ngeePisces ezikhulayo?
Iintlanzi ezikhulayo abantu zihlala edadayo ebomini kwisimo esifana nephupha kwaye ungaze uthathe izinto nzulu! Ukuziphatha kwabo ngobubele kunye nobubele kubenza babe ngabahlobo abakhulu abanokubakho ebomini. Bazi abathanda uxolo kwaye baneengqondo neentliziyo ezivulekileyo, ezenza ukuba kube lula ukudibana nazo. Ukunyuka kwePisces kunenkathalo kwaye kukhetha ukungabuthathi ubomi ngokubaluleka. Iintliziyo zabo ezinkulu zithetha bafuna ukukholisa wonke umntu, kodwa ukungazithembi kuhlala kuwenza nzima umsebenzi.
Intsingiselo yokomoya yama-222
Njengokunyuka kwePisces, unobubele (enkosi kuJupiter) kwaye qamba xa ujongene nobunzima (Enkosi kuNeptune). Ngenxa yempembelelo kaNeptune, ingqondo yakho inqwenela entsha, engaziwayo nengalindelekanga. Nangona kunjalo, kwangaxeshanye, ukutyekela kwakho ekubaxeni ubunzima obunokubakho kukuthintela ekuthatheni umngcipheko kunye nokusebenza ngokubonakalayo ekufezekiseni amaphupha akho. IJupiter ikwenza ulangazelele inkululeko, kodwa iNeptune iyakuthintela ekwenzeni kwakho.
Yintoni le ayonyukayo lo mntu unyukayo kubomi bakho bemihla ngemihla
Ukunyuka kwePisces kukwenza ube nesimilo, oko kuthetha ubuqaqawuli bakho kunye ne-intuition ayikukhohlisi. Kuthatha kuphela imizuzwana embalwa ukuqonda imeko okanye umntu ophambi kwakho. Esi sisipho esixabisekileyo, ke qiniseka ukuba umamele ilizwi lakho elincinci langaphakathi kuba liya kukugcinela inkathazo enkulu. Ngaloo mntu unyukayo, ngokuqinisekileyo ungumntu onobuchule bokuyila, awuswele ngcinga kwaye uhlala ucebisa ngezisombululo zantlandlolo, nkqu ne-eccentric. Waziwa njengomntu olunge kakhulu, ozolileyo, ophuphayo, onentliziyo kwimikhono yakho. Uhlala uphendula okwangoku xa ingumbuzo wokunceda.
Amandla kunye nobuthathaka obunxulumene noko
Ukunyuka kwePisces yinto entle, kwaye inikeza ubuchule bayo bendalo, uvakalelo kunye nesisa! Ubuninzi be-hypersensitivity yakho ikwangamandla amakhulu, ukuba uyazi ukuba uyilawula njani. Ukuba kukho into engahambanga kakuhle phantsi kolawulo lwakho, uya kuyazi ngoko nangoko into ekufuneka uyenzile kwaye wenze ngokufanelekileyo. I-Pisces enyukayo inokudlulisela kuwe ubuthathaka obuthile Iintloni ezigqithileyo okanye utyekelo lokubaleka ngokwenyani . Ngokwenene ukulungele ukwenza nantoni na ukuze ubaleke inyani ekunzima kakhulu ukuyithwala.
Impembelelo yePisces ekhulayo kubomi bakho bothando:
Ukuba unePisces ekhuphuka kwitshathi yakho yokuzalwa, uyenzela isithandwa esithambile kwaye esithambileyo. Ufunda ukuziva iminqweno yeqabane lakho kwaye wenze uxhulumaniso olunzulu lweemvakalelo. Ngokwentando yakho, uyakholelwa kuthando lokwenyani kwaye (ukuba awukabinayo indlela yokuhamba nayo), uzimisele ukuyifumana. Xa usebudlelwaneni, uhlala uhambelana nomlingane wakho kwaye wenze konke ukubonwabisa. Kwinqanaba lomzimba, uhlala uqala isondo nge-caresses ezimnandi.
Eyona midlalo mihle ngokunyuka kwePisces yile;
Ukuhambelana kwePisces + neLibra
Ukuqonda kweenkwenkwezi uSusan Taylor:
uyibonisa njani indoda yegemini
Ukudibanisa uphawu olukhulayo kunye nophawu lwakho lwe-zodiac kuvumela ukuqonda okunzulu nokucace gca ukuba ungubani kanye kanye.
-Bonisa umntu okhuphuka kunyuka kunye nesibalo sokubala esinyukayo. -
Cofa kwifayile yakho ye- uphawu lwe-zodiac ukufumanisa iimpembelelo zePisces ezonyukayo kuphawu lwakho lwelanga.
Cofa kumqondiso wakho we-zodiac IiAries ITaurus IGemini Umhlaza Leo Intombazana ILibra IScorpio Isagittarius Capricorn U-Aquarius intlanzi
I-Tarot 2021: UkuFunda kunye nokuTolika kwamakhadi akho
6 kunye no-7 ukuhambelana kwamanani
4 kunye no-7 ukuhambelana kwamanani
ungayiphumelela njani indoda ebukhali
ikamva 2 amandla ngamanani
njani ukutsala umdlavuza indoda ngesondo
Iibra kunye ne-scorpio ziyahambelana